Ny fampahalalana fototra - Dongguan Hobrin Badge And Gift Co., Ltd.
Fankasitrahana Ny baiko rehetra dia hohamafisina amin'ny asa taratasy ary tsy misy vidiny fandefasana. Ny singa tsirairay dia ho fantatra miaraka amina kaody sy ny lohateny maha-folo isa. Ampiasao ity kaody ity rehefa miresaka momba ny kaomandinao.
Ny zavakanto dia mila sary sary EPS. Ny sary dia 300 dpi.
Katalaogin'ny vokatra Omeo endrika maimaim-poana miaraka amina endrika maromaro.
Fanovana / fanafoanana Ny fangatahana fanovana na fanafoanana dia azo averina arakaraka ny fepetra famokarana.
Ny loko PMS® dia mifanitsy akaiky amin'ny loko tsy misy sarany fanampiny
Tany niaviany Araka ny lalàna, ny entantsika dia tsy maintsy mitondra ny mariky ny tany niaviany. Hasiana tombo-kase na hapetaka ao ambadiky ny entana rehetra ity marika ity afa-tsy ny maningana. Azafady mifandraisa amin'ny ozinina raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo faningana ireo.
Isa mitohy Eo ambadiky ny ankamaroan'ny marika very fananana dia azo ampiasaina isa isa, kaody QR tsy manam-paharoa.
Maty sy fitaovana Mamolavola, manamboatra bobongolo, mitahiry bobongolo ho serivisy ifotoran'ny orinasanay ary mitazona ny tompony. Ny saram-pananana dia ampidirina amin'ny vidin'ny ohatra. Ny bobongolo rehetra dia hotehirizina ao anaty rakitra mandritra ny roa taona, raha tsy vita ny fandaminana mialoha amin'ny fotoana anafarana.
Fialana andraikitra Tsy adidintsika ny fahatarana ateraky ny toe-javatra tsy voafehintsika loatra. Anisan'izany ny, saingy tsy ferana amin'ny: loza voajanahary, fitokonana, fitohanana any amin'ny seranan-tsambo fidirana sy seranan-tsambo fiaviana, fadintseranana, DSS, fizahana na fanemorana, na loza hafa.
Fanarahan-dalàna ara-materialy Ny fitaovana ampiasain'ny orinasa Hobrin dia mifanaraka amin'ny fenitry ny firenena samihafa. Raha manana fepetra manokana ianao dia ampahafantaro anay mialoha. Akora, enamel ary loko. Ny tetikasa manokana rehetra dia handalo ny fitsapana CPSIA. Azonao atao ny manao fanandramana antoko fahatelo mahaleo tena amin'ny baiko natokana ho anao fa hanana vola fanampiny. Raha takian'ny lalàna, dia azo omena taratasy fanamarinana ho an'ny baikonao. Azafady ampio 7-10 andro hanaovana fitiliana
Fonosana Vahaolana manokana natokana ho an'ny tetikasanao. Azafady mifandraisa amin'ny varotra azafady.
Vidiny Noho ny fiovaovan'ny vidin'ny akora matetika, ny fiovana mety amin'ny taham-pandraharahana sy ny tahan'ny fifanakalozam-bola eny an-tsena, manan-kery mandritra ny 10 andro ny tolotra ataonay. Azafady mba hamafiso alohan'ny hametrahana ny baiko.
Sarin'ny vokatra, fampiasana santionany raha tsy ampahafantarinao ny orinasa Hobrin amin'ny asan'ny taratasy tsy hampiasana ny sary, ny vokatra novokarin'ny orinasa Hobrin dia mety hiseho ao amin'ny tranokala na fampirantiana amin'ny ho avy. Rehefa avy nanamafy fa tsy azo ampiasaina ny santionany sary, ny orinasa Hobrin dia hanaja ireo lalàna ary tsy hampiasa izany amin'ny publication, tranokala ary foara fivarotana.
Teny nindramina Ny baiko rehetra dia mila manamarina ny vidiny alohan'ny hanamafisana ny filaminana, ny habetsahana betsaka, ny drafitra fiaraha-miasa eo ambonin'ny fehezanteny MOQ dia hankafy ny vidiny tianao.
Avereno ny baiko Ho an'ny kaomandy miverina napetraka ao anatin'ny roa taona aorian'ny baiko teo aloha dia tsy hisy ny sarany bobongolo. Rehefa mametraka ny kaomandy dia miangavy anao hijery ny vidiny teo aloha sy ny kaonty indray araka ny tena vidin'ny fitaovana. Raha misy fiakarana amin'ny vidiny dia mila manamafy ny vidiny indray ny roa tonta.
Politika famerenana raha misy olana ara-kalitao, Aza mahafeno ny fepetra fifanarahana sy ny fenitra ohatra. Ny fangatahana fiverenana dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny entana, aorian'ny fanamafisana, ny orinasa Hobrin dia haverina ao anatin'ny fe-potoana iray.
Ny baiko maika
Ny fepetra takiana amin'ny daty fandefasana manokana dia azo fenoina raha angatahina sy eken'ny orinasa. Ny orinasa Hobrin dia hanafaingana ny fanodinana. Tsy hisy fiampangana fanampiny. Mifandraisa aminay ny varotra anay.
Mandany fotoana tsy tapaka 8 -10 andro, santionany manokana | | (loko plating) 10-12 andro. Azafady mba manomeza kaonty fandefasana raha ilaina ny fandefasana haingana.
Ny daty fanaterana ny entana dia hampiharina araka ny nifanarahan'ny roa tonta. Raha misy filana manokana mandefa mialoha na manemotra ny fandefasana azy dia mifanaraka amin'ny 5-7 andro mialoha.
Ny ankamaroan'ny baiko dia alefa amin'ny endrika FOB CA. Raha tsy angatahina amin'ny fomba hafa dia hampiasaina ny UPS. Aorian'ny toerana fahatelo dia sarany ny sarany XXXX isaky ny toeran-kaleha amin'ny fandefasana entana any an-toerana amin'ny toerana maro. Ho an'ny fandefasana mivantana iraisam-pirenena an-dranomasina, ampio XXXXX isaky ny fonosana, miampy ny sonia mpitatitra entana ilaina izany.
Fahatsapana andraikitra ara-tsosialy
Nahazo ny fanarahan-dalàna momba ny fanarahan-dalàna ara-tsosialy ny orinasanay, ao anatin'izany ny smeta, kaonty 4 eo an-toerana. Ny fanamarinana sy ny fanaraha-maso dia ahitana ny fenitry ny asa, ny fahasalamana sy ny fiarovana, ny tontolo iainana ary ny etika.
Fametrahana 30% miaraka amin'ny baiko. Manaiky visa izahay, MasterCard ary American Express.
Ny sary famantarana, ny anarana ary ny mari-pamantarana aseho an'ity tranonkala ity dia ohatra iray amin'ny famokarana ny ozinina. Tsy mivarotra azy izahay. Ny orinasa dia mihevitra fa ny mpanjifa dia mahazo alalana hampiasa ny sary famantarana sy ny mari-pamantarana natolotra ho an'ny famokarana. Ny orinasa Hobrin dia tsy tompon'andraikitra amin'ny adihevitra momba ny mari-pamantarana na ny zon'ny mpamorona.